पाल्पाकाे १० स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दी कहाँ बढ्ने, कहाँ घट्ने ? – Palpa Samachar
पाल्पाकाे १० स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दी कहाँ बढ्ने, कहाँ घट्ने ?
By palpa samachar	 On Dec 17, 2019
पाल्पा । पाल्पा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहबाट प्रावि तहको ४ सय ४० शिक्षकको दरबन्दी काटिने भएको छ । पछिल्लो समय विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदै गएपछि पाल्पा जिल्लाको मात्र ४४० शिक्षक दरबन्दी काटिने भएको हो । पाल्पामा मावि र निमावि तहमा शिक्षक दरबन्दी कम भएपनि प्रावि तहमा भने विद्यार्थी संख्याको तुलनमा दरबन्दी बढी छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालसालै कायम गरेको दरबन्दी अनुसार जिल्लाको तानसेन नगरपालिकाबाट प्रावि तहको सबैभन्दा बढी ६५ शिक्षक दरबन्दी काटिनेछ । तानसेनमा निमावि र मावि तहमा भने दरबन्दी बढ्नेछ । निमावि र मावि तहमा दरबन्दी बढेपनि तानसेनमा पहिलेको सबै तहको दरबन्दीको तुलनामा २९ दरबन्दी कम नै हुनेछ ।
जिल्लाको पूर्वखोला गाउँपालिकाबाट प्रावि तहको १५ जना दरबन्दी काटिनेछ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ दरबन्दी अनुसार निस्दी गाउँपालिकाबाट ६० जना प्रावि तहको दरबन्दी काटिनेछ । माथागढी गाउँपालिकाबाट ४५ दरबन्दी प्रावि तहमा काटिनेछ ।
यस्तै रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाबाट ६४, बगनासकाली गाउँपालिकाबाट ५६, रिबदीकोट गाउँपालिकाबाट ४४, रामपुर नगरपालिका र तिनाउ गाउँपालिकाबाट २१/२१ र रम्भा गाउँपालिकाबाट ४९ शिक्षक दरबन्दी कटौती हुने भएको छ ।
सरकारले दरबन्दी खाली भएका स्थानीय तहमा शिक्षकदरबन्दी समायोजन गर्ने, अस्थायी र करार शिक्षक भएका स्थानमा समेत दरबन्दी थप गर्ने बताइएको छ । यसरी थप गर्दा समेत दरबन्दी भन्दा बढी भएका शिक्षकको दरबन्दी जिल्लान्तर हुने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षक व्यवस्थापन भने कसरी गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।
यो समाचार अनलाइन पत्रिका इरानीमहल डटकमबाट साभार गरिएको हो । सम्पादक
लालीगुँरास दुग्ध सहकारी हुमिनको साधारणसभा सम्पन्न